Fahaiza-miatrika ny fiovan’ ny toetrandro: hisy fanadihadiana eny anivon’ny valanjavaboary 14 | NewsMada
Fahaiza-miatrika ny fiovan’ ny toetrandro: hisy fanadihadiana eny anivon’ny valanjavaboary 14
Par Taratra sur 16/05/2019
Natomboka omaly ny tetikasa momba ny fanadihadiana hanamafy ny fahaizana miatrika ny fiovan’ny toetrandro eny anivon’ny valanjavaboary 14 eto amintsika, ampahany amin’ireo tantanin’ny Madagascar National Parks (MNP). Tanjon’ny fanadihadiana ny hijery ny harena azo trandrahana ka hisarihana ny mpitsidika ho avy hizaha ny valanjavaboary.
Hisy fifanakalozana ihany koa amin’ny vondron’olona ifotony hamantarana ny filan’ny mponina mivelona eo amin’ny manodidina hampihenana ny tsindry mahazo ny valanjavaboary. Ivontoerana iraisam-pirenena iray manana ny fahaiza-manao antsoina hoe UICN no hisahana ny fanadihadiana eny ifotony miaraka amin’ny teknisianin’ny Madagascar National Parks. Ho avy eto amintsika ny manam-pahaizana iraisam-pirenena amin’ny fiarovana ny valanjavaboary aty Afrika. Haharitra hatramin’ny volana desambra ny tetikasa, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, Andriamanjato Mamitiana, omaly teny Antaninarenina. Misy masontsivana nisafidianana manokana ireo valanjavaboary hanaovana ny tetikasa toy ny biby sy ny zavamaniry tsy fahita raha tsy ao anatiny ihany eto Madagasikara izay azo avadika ho loharanom-bola amin’ny fizahantany ekolojika. Mitentina 1,5 tapitrisa dolara ny sorabola entin’ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (BAD) hanatanterahana ity tetikasa ity satria tsapan’izy ireo fa zava-dehibe ho an’ny fitondrana malagasy ny fiarovana ny tontolo iainana, araka ny vinan’ny filoha.
Rehefa mivoaka ny valin’ny fanadihadiana, hovoriana ny mpamatsy vola avy amin’ny sehatra tsy miankina hampahafantarina ny harena samihafa amin’ireo valanjavaboary ireo ka havadika ho circuit hisarihana mpizaha tany vahiny sy malagasy. Hiteraka asa ho an’ny tanora izany sady hampandroso ny fari-piainan’ny mponina mivelona manodidina ny valanjavaboary , hoy ny mpandrindra ny tetikasa sady tomponandraikitra ao amin’ny MNP, Razanajovy Chantal.